Sida loo Play MKV Files on TV Apple ee Mac / Win (Windows 8 ka mid ah)
MKV waa isku mid rimidda in weelasha kale ee multimedia sida AVI, MP4 ama MOV. Waxa ay u badan dabacsan ee riixo oo sida caadiga ah ka dhigaysa in size yar la video tayo isku mid ah / saarka audio, gaar ahaan HD videos. Movies tayo Great Waxaa sii kordhaya arkay lagu gacangeliyey internet-ka via qaab MKV. Si kastaba ha ahaatee, waa nixi ah in qalabka caanka ah badan lahayn hortooda ka ah bixinta taageero ah ee qaab taas, oo ay ku jiraan TV Apple.
Waxaa jira ugu yaraan 2 laba laba u ciyaaro MKV on TV Apple:
Part One - Stream MKV in Apple TV toos ah oo aan diinta kula Wondershare Media Server
Part Two - Beddelaan MKV in qaabab Apple TV taageerto dibna wareejiyo TV Apple
Part One -How durdurka MKV in Apple TV la Server Media Wondershare
1. Tan iyo Wondershare Media Server waa kaliya la dar-ku u Wondershare Video Converter Ultimate, waa inaad marka hore soo bixi Wondershare Video Converter Ultimate.
2. Ka dib markii lagu rakibay, waxaa jiri doono 2 walxood ee desktop, guji Server Media, taas oo u eg Wi-Fi icon.
3. Double click si ay u abuurtaan, ka dibna aad u iman doonaan inay interface sida raaco, qalabka ay taageerayaan oo dhan waxaa ka mid ahaa Apple TV la ogaan doonaa si toos ah u hoos. Fadlan la soco in qalabka oo dhan - PC leh Server Media, TV Apple oo screen weyn waa in ka yar internet la mid ah iyo in la hubiyo in dhammaan oo ka mid ah ka shaqeeya si wanaagsan ula software dambeeyay.
4. Riix "Import" in ay dajiyaan MKV faylasha aad rabto in aad sii qulquli in Apple TV, doorato qalabka sida oo ay taageerayaan TV Apple. Markaas dhammaan faylasha tusi doonaa sida dabagal, ka dib markii mouse ku biiro kooxda ka badan, oo waxaad arki doontaan icon Wi-Fi oo muujinaya on file kasta. Guji ka icon Wi-Fi in "Play on TV".
5. Ka dib markii riix batoonka, waxaa jiri doono suuqa kala pop-up ah, kaas oo noqon doona qofka xukuma fog aad shaashadda weyn. Iyo MKV videos aad tusi doonaa on TV si toos ah. Fadlan la soco in aanad ku eegaan kartaa video ee PC la Media Server hadda.
Part Two - Beddelaan MKV in qaabab Apple TV taageerto dibna wareejiyo Apple TV
Haddii aad hesho laba files HD MKV oo aad rabto inaad u daawado ee Apple TV, waa inaad marka hore iyaga loogu badalo in ay TV Apple qaabab saaxiibtinimo. Si tan loo sameeyo, qalab fudud iyo user-friendly Video Converter si weyn lagu talinayaa. Waxaa qoreysa xawaaraha aalladda degdeg ah (6X dhakhso diinta) oo 1: 1 ratio tayada wax soo saarka. Intaas waxaa sii dheer, waxa uu siiyaa horena la filaayo in ay ku habboon Apple TV. Oo raac hoos ku qoran oo buuxi MKV in ay diinta ka TV Apple ee Windows (Windows 10 ka mid ah) si fudud oo dhaqso.
Fiiro gaar ah: Laba nooc heli karaa: Video Converter (taageertaa Windows 8Windows 8/7 / XP / Vista) iyo Video Converter u Mac (taageertaa Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10,10, 10.9, 10.8, 10.7, 10.6). Waxay wadaagaan feature la mid ah. Hoos hage qaadataa shaashada Windows Version.
Tallaabo 1: Ku dar files MKV in MKV si Apple Converter TV
Waxaad ku shuban kartaa files MKV barnaamijkan adigoo gujinaya "Beddelaan" "Add files" in ay helaan faylka caga ama si fudud u jiidi oo hoos u MKV videos si aad u interface ugu weyn. Haddii aad leedahay labo ka mid ah files MKV, iyaga wada shuban ah si loo badbaadiyo waqtiga iyo sahlo diinta. Ka dib markii ay si guul leh u soo degida, waxay ku tusin doonaa sida thumbnails. Waxaad hagaajin karo si liiska, yeelaan magaca saarka file ah oo ku eegaan videos shaashadda xaq previewing ah.
Talaabada 2: Dooro Apple TV horena liiska qaab ouput
Riix icon image dhinaca midig ee interface ugu weyn in la furo liiska qaab wax soo saarka. Dooro horena "Apple TV" ama "Apple TV HD" ka "aaladaha Apple" (ee presets filaayo in inta badan ka shaqeeyaan weyn).
Talooyin: haddii aad u baahan tahay inuu ciyaaro faylasha la gediyay on Apple TV3, waxaad ka "Qaabka" dooran kartaa M4V> "Video" ka dibna riix "" Settings "si ay ula qabsadaan goobaha ay sida soo socota: Video (codec: H.264, Resolution : 1920 * 1080; jir ah Rate: 24 fps, heerka Inyar: Qiimaha sare); Audio (codec: AAC; Channel: 2 kanaalada rikoodh; Muunad Rate 44100Hz; Rate Inyar: Qiimaha sare).
Tallaabo 3: Ka billow MKV in ay diinta ka Apple TV
Marka aad ku qanacsan tahay, riix badhanka diinta si ay u bilaabaan MKV in ay diinta ka TV. Barnaamijkan waxa aad u hufan ee diinta iyo bar horumarka tusi doonaa waqtiga inta hadhay.
Waxaas oo dhan files MKV aad la ciyaari karto TV Apple habsami leh. Great Job! Download hoos ku qoran video Converter (Windows 8 taageeray) in ay la kulmaan diinta ka kaaftoomi-free!
Eeg a video tutorial faahfaahsan:
Chat Video Apps in caawi oo gaaray saaxiibadaa Facebook ee Android iyo macruufka Phones
Sida loo rakib Apps ku doonayay oo HTC
> Resource > Apps > Sida loo Play MKV Files on TV Apple ee Mac / Win (Windows 10 ka mid ah)